काठमाडौ कै यी ठाउँः जहाँ पुरुष खोज्न स्कुटरमा आउँछन् युवती ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
राजधानीवासी दिउँसो समयमा धुलो, धुँवा र ट्राफिक व्यवस्थापनको समस्या झेलिरहेका छन्।
फोहोर, धुलो, धुँवा र ट्राफिक समस्याको चाङले थिचिने काठमाडौंको रात्रिकालीन अवस्था पनि वि’कृतिजन्य क्रियाकलापले भरिएको छ। शुक्रबार राति काठमाडौंलाई नियाँल्दा विभिन्न प्रकारका वि कृतिको चाङ फेला पारेको छ ।
निगरानीका क्रममा भेटिएको यस्तो संवादले नै पुष्टि गर्छ, राजधानीमा रात्रिकालीन समयमा हुने वि कृतिजन्य कार्य ‘जाने हो?’ स्कुटर घ्याच्च रोकियो ।
यौ नकर्मी महिला तथा तेस्रो लिं गीको बिगबिगी छ । कोही नयाँ देख्नेबित्तिकै उनीहरू नजिक पुग्छन् र टाँसिँदै बार्गेनिङ सुरु गरिहाल्छन्
रत्नपार्क- दाइ जाने हो? कति ? १३००, होल ना इटको ५००० रुम यसैमा
रत्नपार्क आसपास राती ९ बजे कानमा ठोकिएको आवाज हो यो । महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीलगायत रत्नपार्क क्षेत्रमा यसैगरी बार्गेनिङ चलिरहेका छन् अर्थात् जवानीको मोलतोल यसरी नै भइरहेछन्। यौ नकर्मी महिला तथा तेस्रो लिं’गीको बिगबिगी छ । कोही नयाँ देख्नेबित्तिकै उनीहरू नजिक पुग्छन् र टाँसिँदै बार्गेनिङ सुरु गरिहाल्छन् । केही असहज जवाफ आउनेबित्तिकै गाली गर्न थाल्छन्।
दरबारमार्ग, ठमेलको सञ्चयकोष क्षेत्र, नसिङचोक ज्याठा तथा रत्नपार्क आसपास क्षेत्रमा रातिको समयमा तेस्रो लिं गी तथा यौ नकर्मी महिलाको बिगबिगी हुने गरेको छ ।
एकैछिन फुटपाथ वा त्यस क्षेत्रमा कोही उभिनु मात्रै पर्छ, यस्ता धेरै अफर आइपुग्छन्। यौ कर्मीहरूले स्कुटी लिएर विभिन्न होटल, अर्पाटमेन्ट र डेरामा पुर्याएर ध न्दा चलाउने गरेको देखिएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।
फिचर फोटोः बिदेशी मोडल, गुगलबाट